Y Event | YTV
Kid Programs | Advertise |
Home » Y Event
Events တွေရှာရတာ ပင်ပန်းနေပြီလား...?
Events တွေစုံစမ်းရင်း အချိန်တွေကုန်နေပြီလား...?
ဒါဆိုရင်တော့ ပရိသတ်ကြီး အနေနဲ့ အချိန်ကုန်ခံပြီး ပင်ပန်းစရာမလိုတော့ပါဘူး...
ကျွန်တော်တို့ YTV Channel မှ Y Event အစီအစဉ်ကို စတင်ရေလောင်းပေါင်းသင်နေပါပြီ...
Event တစ်ခုခြင်းစီနဲ့ အချိန်နဲ့ နေရာအသေးစိတ်ကို စီစဉ်တင်ဆက်သွားမယ့်အပြင်...
Event တွေအကြောင်းကိုလည်း အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးနော်...
Hanukkah ရိုးရာ မီးထွန်းပွဲတော်အခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာလ၂၃ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အစ္စရေးသံရုံးမှာ သံရုံးမိသားစုဝင်များနှင့် ဧည့်သည်တော်များနဲ့ ခမ်းခမ်းနားနားကျင်းပခဲ့ပါတယ်… Hanukkah ရိုးရာမီးထွန်းပွဲတော် ကတော့ ဒီဇင်ဘာအားလပ်ရက်တွေမှာ ဂျူးလူမျိုးတွေ ...
ဝါးခယ်မမြို့နယ်အသင်း (ရန်ကုန်)ကနေ (၆၉)ကြိမ်မြောက် ဝါးခယ်မနှစ်ပတ်လည်သင်းလုံးကျွတ်အခမ်းအနား ကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်…. ဒီအခမ်းအနားလေးမှာတော့ ဝါးခယ်မမြို့က သက်ကြီးပူဇော်ပွဲ ၊ အာစရိယပူဇော်ပွဲနဲ့ ဂုဏ်ထူးရပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဆုချီးမြင့်တဲ့အခမ်းအနား လေးတွေပါဝင်ပါတယ်…ဒါ့အပြင် ဝါးခယ်မကို အလွမ်းပြေစေဖို့ “ဝါးခယ်မအလွမ်းပြေ” ...
ဒဂုံမြို့နယ် ၊ သံတမန်လမ်းမှာရှိတဲ့ Mary Chapman နားမကြားသောကလေးများကျောင်းမှာ UKK လုံချည် နှင့်အတူ မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်ထူးအောင်တို့မှ လုံချည်နဲ့ ကလေးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ လှူဒါန်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်… ဒီကျောင်းမှာ လှူဒါန်းဖြစ်ခဲ့ပုံနဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံး စီစဉ်ကျင်းပပြုလုပ်မည့်3Vs3Soccer Myanmar ပြိုင်ပွဲ စာနယ်ဇင်း ရှင်းလင်းပွဲ အခမ်းအနား ကို ရန်ကုန်မြို့ နိုဗိုဒယ်ဟိုတယ် ...
တေးသံရှင် G Lattရဲ့ “December Radio”တေးစီးရီးသစ် မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ၁၈ရက် နေ့က Radio Barမှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ တေးသံရှင် G ...
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း POCARI SWEAT Myanmar ကဦးစီးပြီးကျင်းပတဲ့ မာရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ POCARI SWEAT RUN 2019 ပွဲအခမ်းအနားကြီးကို ရန်ကုန်မြို့ ၊ တာမွေမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရွှေထွဋ်တင်ဝန်းမှာ ...
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်၌ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်မည့် Business cloud စနစ်ဖြစ်သည့် Dynamics 365 ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း အခမ်းအနားကို Microsoft မြန်မာမှ ...
၂၀၂၀ ခုနှစ်ရဲ့အကြီးမားဆုံး ဥယျာဉ်ပါတီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Singapore Festival 2020” အကြိုအခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်…သည်အခမ်းအနားမှာတော့ Assistant Director, Market Planning , International Group ...
YTV Channel သည် DVB –T2 စနစ်ဖြင့် လေလှိုင်းတွင် အခမဲ့ ထုတ်လွှင့်မည့် တီဗီရုပ်သံလိုင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် ပူးပေါင်းသဘောတူညီမှုကိုလည်း ၂၀၁၈ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ရက်နေ့ ကရရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
နံပါတ် - ၈၈၆/၈၈၈, ပြည်လမ်း, ၉မိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။